समाचार - सौर प्यानल र ब्याट्रीहरूको साथ अस्थिर पावर ग्रिडबाट टाढा जाँदै छ
अस्थिर पावर ग्रिडबाट सौर प्यानल र ब्याट्रीहरूको साथ सर्दै
बढ्दो विद्युत् दर र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूको साथ हामी हाम्रो ग्रिड प्रणालीबाट देख्छौं, यसमा कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन कि धेरै मानिसहरूले परम्परागत शक्तिको स्रोतबाट टाढा परिवर्तन गर्न थालेका छन् र आफ्नो घर र व्यवसायको लागि अधिक विश्वसनीय उत्पादनको खोजी गरिरहेका छन्।
पावर ग्रिड विफलताको पछाडि के कारणहरू छन्?
जबकि ऊर्जा ग्रिड शक्तिशाली र पर्याप्त प्रभावशाली छ, यसको समस्याहरू बढ्दो छ, वैकल्पिक ऊर्जा र ब्याकअप पावरलाई आवासीय र व्यवसायिक सफलताको लागि अझ आवश्यक बनाउँदै।
उपकरण उमेरहरूको रूपमा, यो बिस्तारै अविश्वसनीय हुन्छ, प्रणाली नविकरण र अपग्रेडको आवश्यकता बनाउँदै। यदि यी आवश्यक नवीकरणहरू पूरा भएन भने, परिणाम विद्यमान विद्युत् गतिमा हुनेछ। यी ग्रिडहरू नवीकरणीय उर्जा स्रोतहरू जस्तै सौर प्यानलहरूको साथ घरहरूसँग एकीकृत गर्न पनि त्यस अनुरूप अपडेट गर्न आवश्यक छ तर अझै ग्रिडमा जडित छन्।
२. प्राकृतिक प्रकोप
गम्भीर आँधीबेहरी, तुफान, भूकम्प, र तूफानले महत्त्वपूर्ण क्षति र ग्रिड अवरोध निम्त्याउन सक्छ। र जब तपाइँ मातृ प्रकृतिलाई पहिले नै बुढेसकालको पूर्वाधारमा थप्नुहुन्छ, परिणाम घरहरू र व्यवसायहरूको लागि ठोस डाउनटाइम हुन्छ।
P.पावर ग्रिड हैकर्स
हाम्रो ग्रिड संरचनामा पहुँच प्राप्त गर्न र शक्ति अवरोधको कारण सक्षम ह्याकरहरूको बढ्दो खतराले हाम्रो ग्रिड प्रणालीको स्थिरतालाई असर गर्ने अर्को पक्ष हो। ह्याकर्सहरूले बिभिन्न बिजुली कम्पनीहरुको उर्जा ईन्टरफेस को नियन्त्रण प्राप्त गर्न सक्षम थिए, जसले उनीहरुलाई हाम्रो घरहरु र व्यवसायहरुमा बिजुलीको प्रवाह रोक्न सक्षम बनाउँदछ। इन्ट्रुडरहरू ग्रिड अपरेशन्समा पहुँच प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण खतरा हो जुन माटोमा ब्ल्याकआउट्स हुन सक्छ।
H.मान मानव त्रुटि
मानव त्रुटि घटनाहरू विद्युत कटौतीमा योगदान दिने अन्तिम कारक हुन्। यी आउटेजको फ्रिक्वेन्सी र अवधि जारी भएपछि लागत र नुकसानहरू बढ्दै जान्छ। सूचना प्रणाली र सामाजिक सेवाहरू जस्तै पुलिस, आपतकालीन प्रतिक्रिया सेवाहरू, सञ्चार सेवाहरू, आदि, न्यूनतम स्वीकार्य स्तरहरूमा काम गर्नको लागि बिजुलीमा भर पर्छन्।
के सोलार जाँदै छ पावर ग्रिड को अस्थिरता को मुकाबिला गर्न स्मार्ट समाधान?
छोटो उत्तर हो हो, तर त्यो मात्र हो यदि तपाईंको स्थापना सही ढ .्गले भयो भने। अधिक ऊर्जा भण्डारणको लागि ब्याकअप ब्याट्रीहरूको स्थापना र सोलर प्यानलहरू जस्ता बुद्धिमानी सेटअपहरूले हामीलाई अगाडि बढ्ने बिजुलीबाट रोक्न र व्यवसायलाई धेरै पैसा बचाउन सक्छ।
ग्रिड-टाईड बनाम अफ-ग्रिड सौर
ग्रिड-टाई र अफ-ग्रिड सौर्य बीचको प्राथमिक भिन्नता तपाईंको सौर्य प्रणालीले उत्पादन गर्ने ऊर्जा भण्डारणमा निहित छ। अफ-ग्रिड प्रणालीहरूको पावर ग्रिडमा पहुँच छैन र तपाईंको अधिक ऊर्जा भण्डारण गर्न ब्याकअप ब्याट्रीहरू आवश्यक छ।
अफ-ग्रिड सौर्य प्रणाली ग्रिड बाँधिएका प्रणालीहरू भन्दा अधिक महँगो हुन्छ किनकि तिनीहरूलाई चाहिने ब्याट्रीहरू महँगो हुन्छन्। तपाईको अफ-ग्रिड प्रणालीका लागि जेनरेटरमा लगानी गर्न सिफारिस गरिएको छ यदि तपाईंलाई बेलुकाको बेला वा मौसम उपयुक्त छैन भने तपाईलाई शक्ति चाहिन्छ।
तपाईले जेसुकै निर्णय गर्नु भए पनि, अविश्वसनीय पावर ग्रिडबाट टाढा हट्ने र तपाईंको पावर कहाँबाट आउँदछ भन्ने नियन्त्रण लिनु स्मार्ट विकल्प हो। एक उपभोक्ताको रूपमा, तपाईले महत्वपूर्ण वित्तीय बचत मात्र प्राप्त गर्नुहुने छैन, तर तपाईंले सुरक्षा र स्थिरताको धेरै आवश्यक स्तर पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंको शक्तिलाई कायम राख्नेछ र जब तपाईंलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्दछ भने चलिरहन्छ।
सौर्य फ्लड लाइट, आउटडोर सौर लाईट्स, सौर बगैंचा प्रकाश, सौर इन्भर्टरहरू, ग्रिड इन्भर्टर बन्द, सौर स्ट्रीट लाइट,